I-KISS: Ukulula yinto ebalulekileyo kuPhila ngokuPhumelelayo
NgoLwesihlanu, Februwari 5, 2010 NgoLwesibini, Aprili 1, 2014 Travis Smith
Umzobi kunye nombonisi UNick Dewar usweleke kule veki. Wayesebenza kwiinkampani ezininzi ezahlukeneyo ukusuka Ngenyanga yeAtlantic kwiNdlu engaqhelekanga, ukubonelela ngemifanekiso enengqiqo kumagama anomdla kwinqaku okanye kwincwadi. Umsebenzi endiwuthandayo uNick Dewar ubonakalisa zombini ifilosofi yam yobungcali kunye neyam:
Ukulula ngokulula sisitshixo sokuphila ngempumelelo.
Olu luphawu lobuchwephesha kunye nokuchazwa ngokuchaneka kwexesha lokuvavanywa kwendlela yeKISS:
Hayi, ayikuko ukuba i-KISS-
Umgaqo we-KISS-? Gcina ulula, usisidenge.
Zizo zombini ezi ndlela zokutolika zale mihla i-Occam's Razor, ethi? Amaziko akufuneki aphindwe ngaphandle kwemfuneko ,? okanye ngaphezulu ngokubanzi, 'esona sicwangciso silula sithande ukuba sesona silungileyo.?
Ke kutheni ndikuxelela le nto? Kutheni le nto ndirhuqa ifilosofi yenkulungwane ye-14, u-Ace Frehley, kunye nomntu osanda kusweleka waseScotsman kwibhlog? Kuba kuluntu lwethu olukhawulezayo, olukumgangatho ophezulu, oluhlala luhleli, siyalibala ngokuzama ukusombulula iingxaki ngezisombululo ezilula. Rhoqo wonke umntu ukhangela itekhnoloji entsha okanye indlela entsha yokusombulula ingxaki xa sinokusebenzisa izisombululo ezilula ezifuna ixabiso elincinci kunye nokubonelela ngezibonelelo zexesha elide.
Le ntanda-bulumko iyathetha nangeempawu zeemveliso. Kungenxa yokuba imveliso yakho ineempawu ezingaphezulu ayithethi ukuba iya kuhlangabezana neemfuno zabathengi bakho. Ukuba uziva ungazithembi ngokuqonda kwakho kubathengi bakho? Iimfuno, unengxaki enkulu, ebaluleke ngakumbi kunokuba ungazisebenzisa. Kuya kufuneka ubazi ngcono abasebenzisi bakho, abathengi bakho kunye nawe. Sukunyanga nje iimpawu. Yigcine ilula, kwaye ufumanise ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye. Kwaye khumbula-
Owu, kwaye ukhumbule ukuba i-KISS intle kakhulu nayo!
I-AT & T ethandekayo